Diiwaanha maqalka: Codsi waxtar leh oo lagu duubo codka laguna sameeyo duubabka | Laga soo bilaabo Linux
Daalacashada internetka maalmo kahor, raadinaya a Software bilaash ah iyo barnaamij furan oo furan taasi waxay ii ogolaaneysaa inaan duubo cod fudud si aan u sameeyo Podcast yar oo aan ku soo arkay a waxtar leh, yar yar oo fudud codsi loo yaqaan Diiwaanka Audio.
Dhab ahaantii qaar badan ayaa awood u yeelan doona inay doodaan, wax ugafiican Linux aaggaas majiraan Maqalka. Maaddaama Audacity uusan ahayn oo keliya bilaash oo furan, waxay sidoo kale u adeegtaa duub oo wax ka beddel cajaladaha la duubay (dhawaaqyada). Waana wax ku habboon duubista codka tooska ah, beddelidda cajaladaha iyo cajalladaha, tafatirka faylasha codka, beddelidda xawaaraha ama garoonka duubista, iyo waxyaabo kaloo badan. Laakiin, wax baan raadinayey dhib yar oo fudud, taasina waa ay siinaysaa Diiwaanka Audio.
Ku saabsan Maqalka, iyo codsiyada kale ee laxiriira berrin multimedia, gaar ahaan la daabacaada codka aan si qoto dheer u tegi doonin, tan iyo tan, waxaan kugula talineynaa booqashada iyo akhrinta post la xiriira hore soo socda:
Si kastaba ha noqotee, waxaan soo qaadan doonaa oo keliya beddelka Audacity halkaas loogu sheegay ujeedooyin wax ku ool ah:
mowjado mowjado ah
Diiwaanhaha Maqalka: Meel Furan Muuqaalka Multimedia App
1 Diiwaanhaha Maqalka: Meel Furan Muuqaalka Multimedia App
1.1 Waa maxay Rikoodh maqalku?
Waa maxay Rikoodh maqalku?
Ereyo fudud oo wax ku ool ah ayaan ku sifeyn karnaa Diiwaanka Audio sida:
"Barnaamij heer sare ah oo loogu talagalay duubista codka (dhawaaqyada) kombiyuutarka. Qalabkani wuxuu u oggolaanayaa isticmaalaha inuu duubo codka ka soo baxa aaladaha ay ka mid yihiin makarafoonada, kaamirada webka, kaararka codka, iyo sidoo kale barnaamijyada ay ka mid yihiin ciyaartoyga warbaahinta badan isticmaala ama daalacashada internetka, iyo kuwo kale.".
Diiwaanka Audio hadda waxay leedahay 2 websaydh rasmi ah LaunchPad. ka marka hore kaas oo ka kooban kuwa ugu casrisan ee la fulin karo, laga soo bilaabo nooca loogu talagalay Ubuntu 20.04 (Foocal) ilaa laga helayo Ubuntu 15.04 (cad). Iyo labaad kaas oo ka kooban fulinnada loo heli karo qoraalkii hore, taas oo ah, laga bilaabo Ubuntu 15.04 (cad) up Ubuntu 10.10 (Maverick).
Iyaga dhexdooda, habka rakibaadda waxaa laga heli karaa iyadoo lagu daro ka mid ah Kaydinta PPASi kastaba ha noqotee, waa suurtagal in badan GNU / Linux Distros xirmada waa la helay waxaana lagu rakibi karaa amar fudud via maamule xirmo konsole o xarunta software rakibida garaafka
Kiiskeyga shaqsiyeed, tan iyo, waan isticmaalaa MX Linux 19.2 (gaar ahaan respin u gaar ah oo dib loo qaybin karo oo la yiraahdo Mucjisooyinka) amarka fudud ee hoose, waxaan awooday inaan rakibo iyada oo aan dhibaato weyn:
Sida aad ku arki karto sawirka isla markiiba kor iyo hoosba, the Isdhexgalka Isticmaalaha Sawirka (GUI) de Diiwaanka Audio iyo iyada Qaybta Qaabeynta waa wax iska fudud oo toosan. Si kastaba ha noqotee, ka mid ah astaamaha iyo shaqooyinka barnaamijkan yar ee fudud ee multimedia waxaan ka xusi karnaa waxyaabaha soo socda:
Baarka sare halkaas oo uu ku yaal badhanka lagu bilaabayo oo la joojinayo duubista codka si loogu shaqeynayo iyadoo la adeegsanayo tilmaamayaasha xaaladdeeda.
Qeyb dhexe iyada oo la adeegsan karo Jadwal barnaamij ahaan loo adeegsan karo iyadoo la adeegsanayo qoraalka si loo gaaro saameyn sida: Bilow, jooji, hakinta duubista daqiiqad ama waqti cayiman kadib.
Qeyb hoose loogu talagalay Qaabeynta Maqalka halkaasoo aad ku sheegi karto arjiga kaasoo noqon doona isha codka (HW / SW) isla markaana noqon doonta qaabka loo socdo ee lagu duubayo.
Mid badhanka hoose Qaabeyn Dheeraad ah oo noo ogolaaneysa inaan marin u helno xudduudo badan oo maareynta wanaagsan ee arjiga ah Oo xulashadooda lagu arki karo hoosta sawirka hoose.
Sidaad u bogi karto Diiwaanka Audio Maahan adeegsi xirfad leh ama waxay ubaahantahay tafatirka dhawaq tayo sare leh sida Maqalka, laakiin shaqooyinka fudud oo shaqeynaya sida kan yar podcast waxay noqon kartaa mid wax tar leh.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan arjiga multimedia «Audio Recorder», taas oo ah mid aad u fudud oo waxtar leh, oo ka mid ah inta badan baaxadeeda, taas oo ah, in si fudud loo qabto cajalado maqal ah kumbuyuutar kasta oo xitaa samee fudud podcast; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Diiwaanha maqalka: Codsi waxtar leh si loo duubo codka loona sameeyo podcasts
PowerDNS Recursor 4.4 horey ayaa loo sii daayay, ogow warkiisa
Node.js 15.0 wuxuu la yimaadaa cusbooneysiinta NPM, V8 iyo in ka badan